कण्डम निःशुल्क हुँदा प्याड किन भएन स्वास्थ्य मन्त्री ज्यू ? – Palpa Samachar
मैले पहिलो पटक कान्तिपुर मिडिया हाउसको महिला शौचालयमा निःशुल्क प्रयोग गर्नको लागि राखिएको प्याड देख्दा अचम्मित भएको थिएँ । महिला मात्रै काम गर्ने धेरै कार्यालयहरुमा समेत उनीहरुले प्रयोग गर्ने शौचालयमा प्याड राख्न ध्यान नजानुले स्पस्ट देखाउँछ कि हामी अफै खुलेर महिनावारीको कुरा गर्न सक्दैनौं महिला स्वस्थ्यकर्मीसँग कण्डम किन्न नहिचकिचाउने मेरो पुरुष मित्रहरु आपत पर्दा प्याड ल्याइदेउ भन्दा लजाउँछन् । सरकारले निःशुल्क कण्डम वितरण गर्न थालेको लामो समय भइसकेको छ । त्यसैले गाउँघर तिर पनि कण्डमको प्रयोगबारे मानिसहरु खुलेर कुरा गर्दछन् ।
हुर्किदै गरेका किशोरीहरुले कुनै हिचकिचाहट सार्वजनिक शौचालय अनि सरकारी स्वास्थ्थ चौकीबाट निःशुल्क प्याड प्रयोग गर्ने दिन आउला त स्वास्थ्य मन्त्री ज्यू ? halkhabarnepal.com
पाल्पाकै यस्तो गाउँ जहाँ ४२ वर्षदेखि हरि कृतन हुँदै आएको छ